Sina mafana nandrendrika kasety adhesive ho an'ny mpanamboatra atin'akanjo mirindra sy mpamatsy | H&H
Hatevina / mm 0.03 / 0.05 / 0.075 / 0.1
Sakany / m / 1.52m toy ny namboarina
Faritra mitsonika 78-140 ℃
Asa tanana asa milina fanindriana hafanana: 1 70-180 ℃ 15-25s 0.4Mpa
Ity vokatra ity dia an'ny rafitra TPU. Izy io dia maodely izay novolavolaina nandritra ny taona maro mba hihaonana amin'ny fangatahan'ny mpanjifa ny elastika sy ny fisorohana rano. Farany lasa any amin'ny fanjakana matotra io. izay mety amin'ny faritra mitambatra amin'ny atin'akanjo lava, bras, ba kiraro ary lamba vita amin'ny elastika miaraka amin'ny endriny elastika sy porofon-drano. Ho fampiharana ny atin`akanjo anatiny, dia ampiasaina am-pahamendrehana amin'ny famehezana ny hum sy ny andilana. 8mm, 10mm, 12mm, 15mm dia sakan'ny mahazatra matetika ampiasain'ny olona. Mazava ho azy fa mamokatra horonam-bokin'ny ala 1.52m izahay, ary manapaka ny ilan'ny mpanjifa.
1. Fihetseham-po malefaka: rehefa apetraka amin'ny akanjo dia hanana akanjo malefaka sy ahazoana aina ny vokatra.
2. Manohitra ny fanasana rano: rehefa ao anaty toe-javatra fanasana mangatsiaka mafana izy io dia tsy ho tapaka ary hijanona ho endri-javatra io. Izy io dia mahazaka fanasana rano mihoatra ny in-15 40 ℃.
5. Endri-javatra elastika: Ity vokatra ity dia miasa tsara amin'ny lamba landihazo-spandex.
Ny horonantsary mametaka LQ361T mafana miempo dia be mpampiasa amin'ny atin'akanjo mirindra sy akanjo tsy misy fanjaitra hafa izay ankafizin'ny mpanjifa noho ny fihetseham-pony malefaka sy ahazoana aina na fankasitrahana kanto. Izy io koa dia fironana amin'ny ho avy fa ny fampiasana sarimihetsika adhesive melt mafana ho an'ny famehezana famehezana fa tsy ny zaitra mahazatra. Ho an'ny panties tsy misy fangarony, ny vokatra dia ampiasaina amin'ny fanjairana ny panties. Ho an'ny andilana, manana kasety spandex mifanentana ihany koa izahay ho an'ny fametahana bebe kokoa. Noho ny haavon'ny fiempoana avo kokoa sy ny mari-pana miasa, ity kasety mafana miempo mafana ity dia mahatonga ny vokatra farany hanana fanoherana ny hafanana tsara kokoa, ary ny mpampiasa dia tsy hanimba na hampitsonika ny lakaoly rehefa manasa rano mafana. Ity no fampiharana lehibe indrindra an'ity vokatra ity.
LQ361T mafana miempo film adhesive, noho ny elastika sy ny teboka miempo ambony dia azo ampiasaina amin'ny vokatra hafa toy ny ba kiraro tsy misy fangarony, akanjo yoga ary akanjo elastika hafa. Ireo mpiasa dia mampiasa milina lakaoly hametahana lakaoly. Haingam-pandeha ny fahombiazany ary tsara ny vokan'ny lakaoly. Ny fiasan'ny taratasy famoahana dia ny fitadiavana ny toerana mety hanamorana ny fizotrany. Raha ampitahaina amin'ny teknolojia nentin-drazana dia miharihary tokoa ny tombony azo avy amin'ity vokatra ity.
Teo aloha: TPU mafana miempo film adhesive ho an'ny akanjo ivelany
Manaraka: Sarimihetsika adhesive miempo EVA mafana miempo ho an'ny kiraro